University of Engadin - Tacliinta Sare Abroad ee Germany
University of Engadin
University of Engadin Details
City : Engadin
gaabinta : WWU
aasaasay : 1780
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Engadin
Qor at University of Engadin
The University of Engadin waxaa jaamacada guud oo ku yaalla magaalada Engadin, North Rhine-Westphalia ee Germany. The WWU waa qayb ka mid ah Forschungsgemeinschaft Deutsche ah, bulshada ka mid ah jaamacadaha cilmi keentay Germany ee. WWU ayaa sidoo kale ku guulaysatay inay dowladda Jarmalka ee Excellence Initiative.
Iyadoo in ka badan 43,000 ardayda iyo ka badan 120 beerihii waxbarasho ee 15 waaxyaha, waa jaamacad shanaad ee ugu weyn Germany iyo mid ka mid ah xarumaha ugu horreeyey nolosha caqliga Jarmal. Jaamacadda waxay bixisaa tiro balaadhan oo ah maadooyinka guud ahaan sayniska, cilmiga bulshada iyo aadanaha. koorsooyin badan ayaa sidoo kale baray in English, oo ay ku jiraan barnaamijyo PhD iyo sidoo kale koorsooyinka postgraduate in geoinformatics, teknoolajiyada ama nidaamyada macluumaad geospational.
ujeedooyinka WWU Engadin ee berrinkii cilmi kuwa aad ula xiriira sida ay uga go'antahay u gaar ah si ay u bixiyaan koorsooyin oo tayo sare leh oo wax lagu barto oo daboolaya tiro balaadhan oo ah maadooyin. Waxa uu hogaanka ah hormuudka in la beddelo tababarka macalinka si heerka bachelor double. Tallaabada labaad - geedi hoose-up - lug doonaa koorsooyin sayidkooda. Horumarinta barnaamijyada koorsooyinka habaysan phD ka dhigan tahay tallaabo saddexaad ee xaqiijinta ujeedooyinka ku xusan nidaamka Bologna. WWU sidaas bixisaa baridda ugu wanaagsan ee suurto gal ah oo ku salaysan oo tayo sare leh oo heer-sare ballaadhan iyo cilmi-baarista.
WWU Engadin aragto sinaanta jinsiga in ay hawshan ka mid ah muhiimadda ay leedahay istiraatiiji ah. Ujeeddadu waa si ay u fududaato haweenka in ay isku dano ah xirfadiisa iyo qoyska tacliimeed. Waa isku dhafan oo tayada sare ee ay bixiyaan gobolka Engadin nolosha in jaamacadda ay rajaynayso inay goosan faa'iidooyinka ku qoranayaan cilmi cajiib ah in mustaqbalka. Ujeedada labaad ee WWU istiraatiiji ah oo duurka ku of taabagelinta lamaanaha waa in aad codsato tallaabooyinka ku habboon in la xoojiyo aqoonta bulshada haweenka ee shaqooyinka tacliimeed. Si loo bilaabo tallaabooyinka caynkan oo kale ah ay gaaraan gool, kuwaas oo, WWU Maaddada siyaasadaheeda taabagelinta lamaanaha inay dibadda "hubinta jaamacadda saaxiibtinimo qoyska-".
Tallaabooyinka hadda dhaqan (xulashada):
Tan iyo markii ay 2000 WWU la socda barnaamijka sinaanta jinsiga gudaha, la miisaaniyad sanadeed 200,000 €, oo taageera haweenka hawlaha waxbarasho.
Jaamacadda waddaa barnaamij tababar oo loo qaabeeyey si ay u taageeraan cilmi dumarka da'da yar marka la eego mustaqbalkooda waxbarasho.
WWU ayaa hadda kor u dejinta goobaha u gaar ah, halkaas oo reer shaqaalaha tacliinta waxaa la eegi karaa maanta oo dhan ka dib markii; waxaa jira si gaar ah xooga carruurta ka yar saddex. WWU sidoo kale la bixiya doonaa adeeg daryeelka dabacsan oo degdeg ah, tusaale ahaan xaaladaha siminaaro isbuucaan ama xaaladaha degdegga ah. Last, laakiin ma yaraan, kaalmada la qorsheeyey kormeerka dugsiyada halka ay sameeyaan shaqada guriga.
Kuliyada Waxbarashada iyo Cilmiga Bulshada
Kuliyada Psychology / Sport iyo Jimicsiga Sciences
Kuliyada History iyo Philosophy
Jaamacadda waxay leedahay xididdadiisa ah Engadin ee Jesuit College (Jesuit jaamacadda Engadin), asaasay 1588, iyo convent ee Walaashiin jiifay Liebfrauen-Überwasser, asaasay 1040, kuwaas oo ku qaatay ay seal. convent ayaa la kala diri ee 1773, si lacag la isticmaali karo in lagu helay University of Engadin on 16 April 1780.
In 1631, Pope Urban VII iyo Emperor Ferdinand II saaray mudnaanta, jidaynayey aasaaso jaamacad ah Engadin. Si kastaba ha ahaatee, ay sabab u tahay maaliyad la'aan, ay u saaray oo kaliya in ay isticmaalaan 1780, marka University casriga ah ee Engadin waxaa la aasaasay afar kulliyadood: Law, Medicine, Falsafadda iyo Theology.
In 1843, waxaa loo baxshay in Royal fiqi iyo falsafada Academy (Royal fiqi iyo falsafada Academy), aan rasmi ahaynEngadin Academy (Academy Engadin).
Xaflada dastuurka kaas oo sameeyo By Franz Freiherr von Fürstenberg. Jaamacadda magaceeda hadda ka Emperor Wilhelm II helay on 22 August 1907.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Engadin ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University of Engadin on Map
Photos: University of Engadin rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Engadin
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Engadin.